Iindaba-Ukuhanjiswa kweLwandle phesheya ngo-2021
INKQUBO YOKUQHUTYWA KWEKHODI YOKUGQIBELA NE-PMS eThailand
Ekuqaleni kuka-2021, umatshini wokuhambisa amakhadibhodi weGoJON ozenzekelayo kunye neNkqubo yoLawulo lweMveliso igqibile ukuvelisa kunye nokuvavanya kakuhle. Le seti epheleleyo yokuhambisa umgca iya kusetyenziswa kwiprojekthi yaseBangkok, eThailand.
Sele sisebenzisana nalo mthengi ngaphezulu kweminyaka eli-10. Ukuthembela kwabathengi kukulindela kwethu.
Ngomgangatho ogqwesileyo weemveliso, uthungelwano olugqibeleleyo lokuthengisa kunye nokugqwesa phambi kwenkonzo yokuthengisa, iinkonzo zentengiso kunye neenkonzo zentengiso emva, iimveliso zeGoJON zithengiswa kakuhle kumazwe amaninzi afana neJamani, i-Itali, iSpain, iGrisi, iRashiya, iBelarus eJapan, iThailand kunye I-India njlnjl kwaye iphumelele indumiso ephezulu yabathengi.
I-GOJON ikholelwa ekubeni inkanuko ifezekisa iphupha kunye nephupha lenza ummangaliso, kwaye iyakuhlala inamathele kushishino lwe-sprite "yokubonelela ngeemveliso ezilungileyo kunye nenkonzo efanelekileyo ngexabiso elifanelekileyo".
I-GOJON ilindele ukukhula kunye nabathengi, kunye nokudala ukuphumelela ixesha elide.
I-GOJON ihambisa umgca we-Auto Smart ukuya eRashiya ngoMatshi kunye nomgca wokuhambisa amakhadibhodi ngokuzenzekelayo eBelarus ngo-Epreli-Epreli 2021
Nge-Matshi, ngo-2021, i-GOJON's izixhobo ze-Smart: i-Auto Rotator, i-Auto Breaker kunye nenkqubo yokuhambisa yagqitywa yavavanywa kakuhle kumasifundisane. Lo mgca onobuqili uya kusetyenziswa eMoscow, eRashiya.
Nge-Epreli, ngo-2021, i-GOJON yamacwecwe ombane wekhadibhodi ezenzekelayo egqibezele imveliso kunye novavanyo ngaphandle kweziphazamiso. Lo mzila wokuhambisa uya kusetyenziswa eMinsk, eBelarus.
Njengomenzi omnye wobuchwephesha kumzi mveliso ohambisa yonke into, Inkqubo yokuLaminetha eSebenzayo engafaniyo, iNkqubo yoLawulo lweMveliso kunye neCarton yokwenza izixhobo zebhokisi, njl njl. . I-GOJON idibanisa i-R & D, ukuvelisa, ukuthengisa kunye neqela lenkonzo emva kokuthengisa, iindlela zolawulo lwangoku kunye neengcinga zokubonelela ngeemveliso ezifanelekileyo kunye nezinzileyo, isisombululo esipheleleyo sokupakisha kunye nezixhobo ezinxulumene noko.
I-GOJON izinikele ekuboneleleni ngesisombululo se-turnkey ngeemveliso ezigqwesileyo kunye nenkonzo egqibeleleyo yamashishini amaninzi ukwenza ixabiso kunye nenzuzo.
Iinqwelo zokuhambisa iiRoller, Inqwelo yokuhambisa, Indawo yokuSebenza yeWorkshop, Umatshini oSebenzayo wePakethe yePhepha, Ifolda yephepha le-A3, Ibhanki ye-Erp,